Global Voices teny Malagasy » Andro iadiana amin’ny SIDA manerantany: Ireo mitondra ny tsimok’aretina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Novambra 2008 22:19 GMT 1	 · Mpanoratra Juhie Bhatia Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Aostralia, Ekoatora, Filipina, Indonezia, Kenyà, Mozambika, Repoblikan'i Kongo, Rosia, Shina, Vietnam, Fahasalamàna, Zon'olombelona
Ity taona ity no manamarika ny faha-20 taona ny Andro manerantany iadiana amin'ny SIDA  izay tanterahina isaky ny voalohany volana Desambra. Na dia tsapan'ny olona anarivoarivony amin'ny ankapobeny isan'andro aza ny fiantraikan'ny VIH sy ny SIDA dia ity kosa ny andro manokana hamphafantarana bebe kokoa ny amin'ity aretina ity.
Ny lohahevitra raisin'ny andro iadiana amin'ny SIDA amin'ity taona ity dia mifantoka amin'ny “Mitarika – Mankahery – Manafaka,” izay mampivoitra ny paikam-pahaiza-mitarika ahafahana manohitra ny aretina. Na dia tsy nihetsika firy intsony aza ny isanjaton'ny olon-dehibe mitondra ny Tsimok'aretina VIH hatramin'ny taona 2000, dia mbola misy hatramin'ny 33 000 000  nomitondra izany amin'izao fotoana izao ary manakaiky ny 7 500 isan'andro no tratrany koa isan'andro. Niakatra tokoa ny tahan'ny fifindran'ny VIH any amin'ny firenena maro tahaka an'i Shina, Indonezia, Kenya, Mozambika, Rosia, ary Vietnam. Manana ny antontan'isany koa ny SIDA — 2 000 000 ny olona matin'io aretina io tamin'ny herintaona.
Ao amin'ny Poz For Life  i Russell 20 taona no mamaham-bolongana avy any Aostralia amin'ny fitondrany ny tsimok'aretina VIH mba hampirisihany ny hafa hanao fizahana sao mitondra aretina azo avy amin'ny firaisana ka hanaovana ny firaisana voaaro. Tamin'ny lahatsorany voalohany  no nahatsiarovany ny nizahana azy raha mitondra ny VIH izy sy ny fitaintainana tao aminy nandritra ny fiandrasana ny valiny. izao no nataony rehefa fantany fa nitondra ny tsimok'aretina VIH izy:
Ao amin'ny bolongan'ny fikambanam-pampandrosoana AZUR  mitondra ny anarana hoe AIDS Rights Congo , izay tetikasan'ny Rising Voices iray , no miaro ny zon'ny olona mitondra ny tsimok'aretina VIH. Asehon'ny takelaka maro ao aminy ary ny fanavakavahana sy ny henatra atrehin'ireo mitondra ny tsimok'aretina any Congo. Misy lahatsoratra iray ao miresaka momba  ny fiainan'i “Bernadette,” ramatoakely iray mpivarotra akanjo ao an-tsenan'i Tié-Tié any Pointe-Noire . Niova ny fiainany rehefa nolazain'ny namany (sipany?) tao an-tsena fa mitondra VIH i Bernadette.
Juan Carlos, 29 taona avy any Ekoatera,no mamaham-bolongana  ny amin'ny atrehin'izay mitondra ny VIH. Ao amin'ny lahatsorany iray  no iresahany any amin'ny mahazava-dehibe ny fandanjalanjana sy ny vokatsoa azo aminn'y firesahana aman'olona izay sedraina.
Pinoy Poz, izay mipetraka any Quezon  any Philippines, no mamaham-bolongana  ny amin'ny fitondrana ny VIH sy ny fahasarotan'ny ilazana fa mitondra izany izy. Nolazainy ary fa nitia olona nitovy fanahana aminy izy fony 21 taona, fa “niverina nidiot” sivy taona tay aoriana rehefa hitany fa mitondra ny tsimok'aretina izy. Ao amin’ ity lahatsoratra ity  no ilazany fa tsy tsy ratsy araka izay atahorany tsy akory ny filazana fa mitondra ny tsimok'aretina VIH izy, nefa mbola tena sarotra izany.
Maro ny mitovitovy amin'ireo lahatsoratra maro ireo manerantany. Mampivoitra ny feon'ireo sahy miseho fa mitondra ny tsimok'aretina VIH sy ny feon'ireo mpikarakara, ary ireo olo-tsotra te-hampahafantatra ny VIH/SIDA ity Saritany Google anoritan'ny Global Voices ny toerana misy ireo mpamaham-bolongana mitondra ny tsimok'aretina VIH  ity. koa tsidiho ary vakio ny tantaran'izy ireny. Azo atsofoka amin'ny vohikalanao moa ny saritany. koa na dia nifanandrify tamin'ny andro manerantany iadiana amin'ny SIDA aza ny sarintany, dia ho ankotrihina izany mandritra ny taona.
saripikan'ny Riban SIDA mihantona amin'ny hazo  avyamin'i ttfnrob .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/11/30/1391/
 Andro manerantany iadiana amin'ny SIDA: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2008/20081027_WAD_2008.asp
 33 000 000: http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008-gr-mediakit.asp
 lahatsorany voalohany: http://pozforlife.com/2008/09/09/the-beginning/#more-3
 fikambanam-pampandrosoana AZUR: http://azurdev.org/en/index.html
 Rising Voices iray: https://rising.globalvoicesonline.org/
 miresaka momba: http://aidsrightscongo.org/?p=103
 ARV [Antiretroviral] treatment: http://www.who.int/hiv/topics/treatment/en/index.html
 lahatsorany iray: http://blogs.poz.com/juan/archives/2008/11/en_busca_del_ba_1.html
 no mamaham-bolongana: http://backinthecloset.blogspot.com/
 ity lahatsoratra ity: http://backinthecloset.blogspot.com/2008/11/coming-out.html
 Saritany Google anoritan'ny Global Voices ny toerana misy ireo mpamaham-bolongana mitondra ny tsimok'aretina VIH: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=116925014949105791191.00045c9dd6cebd5e130f5&ll=24.527135,14.765625&spn=120.298584,316.40625&z=2
 Riban SIDA mihantona amin'ny hazo: http://flickr.com/photos/ttfnrob/399601764/